Dastabej » साढे चार वर्षसम्म अझै बनेन् खजुराको १८ सय मिटर फोरलेन सडक
साढे चार वर्षसम्म अझै बनेन् खजुराको १८ सय मिटर फोरलेन सडक – Dastabej
साढे चार वर्षसम्म अझै बनेन् खजुराको १८ सय मिटर फोरलेन सडक
नेपालगन्ज । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको ईलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीदेखि १ नम्बर बजारसम्मको १ हजार ८ सय मिटर फोनलेन सडक निमार्णको काम साढे चार वर्षदेखि अलपत्र छ । कोरोना भाइरसको महामारी र मौसम प्रतिकुलताको कारण देखाउँदै निमार्ण कम्पनीले दुई वर्षसम्म काम गरेन नै लामो समयसम्म निमार्णको काम पूरा गरेको छैन । फोनलेन सडक निमार्णको काम गजुरमुखी निमार्ण सेवा ईलामले २१ करोड ४९ लाखमा ०७४ बैशाखमा पाएको थियो । सडक निमार्णका लागि उक्त वजेट संघीय सरकारले दिएको हो । कम्पनीले सम्झौता भएको ३० महिनामा काम सक्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उक्त अवधिमा काम नसकिएपछि कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै सरकारबाट छ महिनाका लागि म्याद थपिएको थियो । तर थपिएको म्यादमा पनि काम नसकिएपछि फेरि छ महिनाका लागि म्याद थपिएको छ । अझै पनि निमार्णको काम पूरा हुन सकेको छैन । स्थानीयले सडक निमार्णको माग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार कोरोनाको महामारी र मौसम प्रतिकुलताका कारण तोकिएको समयमै काम नसकिएको दाबी गर्दै आएको छ । मौसमले साथ दिए भने आउने चैत्र बैशाखमा काम सकिने भए पनि असारको दोस्रो सातामा भत्किएको सरफेस ट्रेसिङ मरम्मता गर्न थालिएको छ ।
यसअघि धुलोका कारण खजुरा बजारका घर र पसलमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै स्थानीयले नेपालगन्ज गुलरिया सडक अवरुद्ध पारेपछि गिट्टी हालेर सरफेस ट्रेसिङ गरिएको छ । तर पीच दुई सातामै उप्किएको छ । सडक कालोपत्रे नहुँदा खजुराका स्थानीय धुलोले हैरान छन् । फोरलेन सडककका सरफेस ट्रेसिङ उपक्एिपछि स्थानीयले गुणस्तरमाथि शंका जनाउँदै सडक डिभिजन कार्यालयलाई जानकारी गराएका गराएका छन् । डिभिजन कार्यालयले तापक्रमले साथ नदिंदा दुई सातामै पीच उप्किएको जनाएको छ । अर्को लेयरको पक्की गर्नुभन्दा पहिले भत्किएको स्थानमा मर्मत गर्नुपर्छ । अनिमात्रै दोस्रो चरणको पीच गर्ने डिभिजन कार्यालयको भनाई छ ।
डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार संघीय सरकारले गुलरीया हुलाकी राजमार्ग अन्र्तगत नेपालगन्जको धम्बोझी चोकदेखि बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाको मैनापोखरसम्म फोरलेन सडक बनाउने निर्णय गरेको छ । डिटेल प्राजेक्ट रिर्पोट (डिपीआर) बनिरहेको छ । उक्त फोरलेन सडक निमार्ण योजना भने बहुबर्षीय योजना हो ।
९ असार २०७९, बिहीबार १३:१२ प्रकाशित
आजको मौसम : हल्कादेखि मध्यम वर्षा
बिदेशीको आवरणमा बिहे गर्छु भन्दै ठगी बढ्यो, सचेत रहन सिआईको सुझाव
अख्तियारद्धारा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिरुद्ध १,३८,९९, ९९८ को भ्रष्टाचार मुद्दा
१.	बलात्कार आरोपमा कोहलपुर १० का निवर्तमान वडाध्यक्ष पक्राउ, ५ दिन थुनामा राख्न म्याद थप
२.	नेपालगन्ज कारागारबाट कुन मुद्दाका को को कैदी रिहा भए (सूची)
३.	राप्ति नदिमा मलामी गएका दुई जना डुबेर बेपत्ता
४.	नेपालगन्जको सभ्य पाइला सुधारकेन्द्रमा एक जनाको मृत्यु
५.	सुधार केन्द्रमा मृत्यु भएका हिकम्त थापाको शरीरभरी निलडाम
६.	रोल्पा कारागारमा मृत्यु भएका नेपालगन्जका हरिजनका नाममा छुटेका शाह भारतीय जेलमा
७.	राप्ती नदिमा दुई जनाको शव फेला